कीव मा जनताहरु को दोस्ती को कट्टर: इतिहास र रोचक तथ्य
रोचक स्मारक प्रदान गर्दछ यसको अतिथि युक्रेन राजधानी अन्वेषण - कीव। मानिसहरूको मैत्री आर्क - तिनीहरूलाई एक। यो सोभियत युग गर्न एकदम एक प्रभावशाली स्मारक छ, मनोवृत्ति जो कीव को मान्छे धेरै अस्पष्ट छ।
कमर र तिध्रा बिचको भाग पार्क - राजधानी को हरियो मुटु
कीव को केन्द्रीय भाग स्थित यो हरियो jewel, को Dnieper को सुरम्य ढलान। सुरुमा (अगाडि 1917 को क्रान्ति एक अग्रगामी - बगैचा भनिन्छ व्यापारीहरूका वर्ष), र सोभियत युग समयमा।
आज Khreshchaty पार्क 12 हेक्टरमा को एक क्षेत्र। आफ्नो योजना, उहाँले XIX सताब्दी को पहिलो तेस्रो देखि खुलिरहेको। यो पार्क मा यस्तो पानी संग्रहालय, Puppet थियेटर, राष्ट्रीय Philharmonic रूपमा धेरै चिरपरिचित स् र आकर्षण छन्। यहाँ स्थित छ र जनताहरु को दोस्ती (कीव) को कट्टर। यो प्रसिद्ध स्मारक को फोटो तल हेर्न सक्नुहुन्छ।
स्मारक शहर को विभिन्न भागबाट देखेको र कीव को सही बैंक हावी गर्न सकिन्छ।
जनताहरु को दोस्ती को कट्टर: त्यहाँ कसरी?
स्मारक पाउन एक तस्वीर छ। कीव को केन्द्र मा सही जनताहरु को दोस्ती को कट्टर छ। व्लादिमीर वंश, 2: निम्न सुविधाहरु ठेगाना।
को आर्क प्राप्त कसरी? यसो गर्न, तपाईं भूमिगत "स्वतन्त्रता स्क्वायर" स्टेशन प्राप्त गर्नुपर्छ र त्यसपछि युरोपेली क्षेत्र (केही सय मिटर उत्तरतिरका) गर्न हिंड्न। त्यसपछि तपाईं गहिराई र एक स्मारक संग एक विस्तृत क्षेत्र हो जो मा, कमर र तिध्रा बिचको भाग पार्क मा प्रवेश गर्न आवश्यक छ।
एक विशाल एम्पिथियटर, Podil, मा कीव को एक अद्भुत दृश्य प्रदान गर्दछ जो - को आर्क नजिकै एक अवलोकन छ Trukhanov द्वीप र बायाँ बैंक।
को Pereyaslav Rada बारेमा सानो
तथाकथित - यो स्मारक को स्थापना युक्रेन को इतिहास मा अर्को महत्त्वपूर्ण घटना गर्न नजिकबाट सम्बन्धित छ Pereyaslav Rada।
जानिन्छ, 1648 मा लिबरेशन जनता युद्ध युक्रेनमा Bohdan Khmelnytsky नेतृत्व गर्न थाले। पाँच वर्ष भित्र, hetman पोलिस दमन अन्तर्गत देखि आधुनिक युक्रेन अधिकांश उद्धार गर्न व्यवस्थित। तुर्क साम्राज्य, राष्ट्रमंडल र Muscovy - तर, भर्खरै गठन क्षेत्रमा समय तीन शक्तिशाली राज्य बीच sandwiched थियो। Bohdan Khmelnytsky संघ तिनीहरूलाई को कुनै सुरु गर्न बाध्य भएको थियो। र उहाँले उत्तरार्द्ध विकल्प रोजे।
1654 मा Pereyaslav मा (अहिले - Pereyaslav-Khmelnitsky शहर) त्यहाँ दुई बातचीत समूहहरू, युक्रेनी र मास्को को एक सभा थियो। यो बैठक को परिणाम मूल्यांकन अझै पनि इतिहासकारहरूले बीचमा बहस धेरै कारण छन्। साँच्चै, एक हात मा युक्रेनको पोल्याण्ड देखि फिर्ता गर्न सक्षम भएको छ, तर अर्कोतर्फ, यो बिस्तारै यसको स्वतन्त्रता गुम्यो, अन्तमा रूसी साम्राज्यको प्रभाव अन्तर्गत परे।
जनताहरु को दोस्ती को कट्टर: स्मारक को इतिहास
यो आज स्मारक को आधिकारिक उद्घाटन को सही मिति को कागजातहरू फेला सकिँदैन रोचक छ। कीव मा मानिसहरूको मैत्री आर्क 1982 मा बनाइएको थियो। यो घटना शहर को 1500th वार्षिकोत्सव मनाउन समय सकियो भनेर विश्वास छ। समयमा युक्रेनी SSR को कम्युनिष्ट पार्टी को टाउको - स्मारक को उद्घाटन समारोह मा नै व्लादिमीर Scherbitsky हुन्थे।
यो विशाल जटिल कार्य बारे चार वर्ष लामो! मानिसहरूको मैत्री आर्क को अक्टोबर क्रान्ति को 65th वार्षिकोत्सव को पूर्वसन्ध्या मा, शरद ऋतु खोलिएको थियो, र तुरुन्तै कीव र अतिथि को मान्छे बीच एक धेरै लोकप्रिय गन्तव्य भयो।
स्मारक को संरचना र प्रतीकात्मक रूप
को संरचना को मुख्य तत्व एक विशाल स्मारक छ, दुई कार्यकर्ता को मूर्तिहरु को निर्वाचकगण - जो पकड छन् रूसी र युक्रेनी, जनताहरु को दोस्ती को आदेश। यो अलेक्जेन्डर Skoblikov द्वारा डिजाइन कांस्य र टाइटेनियम मिश्र धातु बनेको छ। स्तम्भ उचाइ 6.2 मिटर छ। यो तथ्यलाई युक्रेन र रूस को reunification प्रतिनिधित्व गर्छ।
नजिकैको गुलाबी ग्रेनाइट को एक ब्लक मा carved बहु-आंकडा रचनाहरूको एउटा stele, त्यहाँ छ। यो समर्पित छ, वास्तवमा, 1654 मा Pereyaslav को घटना। को stele मा युक्रेनी Hetman चित्रण गरिएको Bohdan Khmelnytsky, रूसी राजदूत Vasily Buturlin, साथै बातचीत प्रक्रिया अन्य सदस्यहरूको।
दुई मूर्तिकला संरचना दुई स्लाव भाषाहरु राष्ट्रका संघ symbolizing, विशाल कट्टर जडान। 70 मीटर - यसको उचाइ 30 मिटर, लम्बाइ छ।
चाखलाग्दो कुरा, यो architect ए Skoblikov, को आर्क को मूर्तिकला संरचना मा काम गर्ने पनि कीव मा महान देशभक्तिपूर्ण युद्ध को स्मारकका जटिल को लेखक हो।
कीव जनता मैत्री आर्क देखि पनि जो भवन वास्तवमा गोलाकार आकृति छ अनुसार, एक आकर्षक लिजेन्ड जोडिएको छ। तल्लो भागमा (चाप) सम्पूर्ण संरचना को मानिन्छ को Dnieper को जमीन ढलान अन्तर्गत लुकाइएको छ।
मित्रता आर्क आज
निस्सन्देह, सोभियत संघ संकुचन पछि, यो स्मारक यसको मूल अर्थ र सान्दर्भिकता गुमाएको छ। 2014 मा रूसी-युक्रेनी सम्बन्ध को वृद्घि पछि, कीव र सबै को धेरै मान्छे नकारात्मक उहाँलाई व्यवहार गर्न थाले।
त्यसैले, स्मारक मूर्तिकला को स्तम्भ देखि लेखिएको पत्र गायब "रूस संग युक्रेन को reunification को मठ मा।" तर, लेखिएको थियो, यो तिनीहरूलाई बिना बाहिर, एक राम्रो पढ्ने गरिएका रूपमा। तसर्थ, चाँडै यो पहेंलो-नीलो रंग स्केच र शब्दहरू ढाकिएको "युक्रेन महिमा!"। साथै, vandals हालै नाक मूर्तिकला तुलसी Buturlina पुनः कब्जा।
वसन्त 2015 मा मन्त्रालयले युक्रेन को संस्कृति को को आर्क निराकरण को संभावना घोषणा। तथापि, जस्तै मन्त्री भन्नुभयो, यो मुद्दा - विशेष कीव अधिकारीहरु क्षमता भित्र।
तर सबै कुरा बाबजुद, जनताहरु को दोस्ती को कट्टर कीव को नक्सामा एकदम लोकप्रिय विषय रहनेछ। द्वारा पार्टी र विदेशी पर्यटकहरूले यो पार स्मारक छैन। विशेष गरी साँझ को दोस्ती को सुन्दर कट्टर यसलाई गर्दा इन्द्रेणी रंग संग उज्यालो छ।
पेरिस रंगशालामा "Stade डे फ्रान्स": इतिहास र उपयोगी जानकारी वस्तु बारे
थाईल्याण्ड मा आराम - ट्रपिकल कथा एउटा यात्रा
प्लाया डेल कार्मेन, मेक्सिको: ठाँउहरु, समुद्र तट र समीक्षा
इजेभ्स्क आकर्षण, फोटो, समीक्षा
बोरा बोरा - अद्भुत सुन्दरता को द्वीप
याल्टा: ठाँउहरु र मनोरञ्जन। मनोरंजन पार्क
रोटरी पंप: सञ्चालन। पंप को प्रकार
महिला मा खमीर संक्रमण को कारण रोग उपचार छ
सीरम रोग: कारण, पूर्वानुमान
रूस मा सबै भन्दा राम्रो अनलाइन क्यासिनो
प्लास्टिक ढोका कसरी समायोजन गर्ने? अगाडि प्लास्टिक ढोका कसरी समायोजन गर्न
राम्रो आध्यात्मिक संगठन: यसको मालिक सल्लाह
विवरण विवाहको - नयाँ जीवन पहिलो चरण
स्नायुशल्यचिकित्सा (नोवोसिबिर्स्क)। नोवोसिबिर्स्क मा संघीय स्नायुशल्यचिकित्सा केन्द्र: समीक्षा
हृदयघात साँस व्यायाम, लोक उपचार, लागूपदार्थ मा dyspnea को उपचार। कुकुर मा हृदयघात मा dyspnea को उपचार
को केप र बालुवाको ढिस्को के हो?
Pleural mesothelioma: लक्षण, कारण, रोकथाम